Nancy oo heshay abaalmarinta Komla - BBC Somali
Nancy oo heshay abaalmarinta Komla
Image caption Nancy Kacungira oo ku guulaysatay abaalmarinta Komla Dumor ee BBC World New
Weriye u dhalatay Uganda oo mar noqotay ganacsade, weriye Radio iyo Telefishin iyo soo jeediye barnaamij ah telefishin hadda ah, ayaa ku guulaysatay abaalmarinta BBC World News ee loogu magacdaray Komla Dumor.
Nancy Kacungira, oo wararka ka tabisa teleshintka KTN ee Kenya ayaa laga soo xushay 200 oo codsi.
Waxay muddo sadex bilood ah joogi doontaa BBC London, waxayna BBC TV uga soo warami doontaa Africa, iyadoo sidoo kale diyaarin doonta warbixinno raadiye iyo qoraalka internet-ka ah.
Abaalmarinta ayaa loo aasaasay si loogu sharfo Komla Dumor, oo soo jeediye ka ahaa BBC World News oo si lama filaan ah u dhintay isagoo 41 jir ah.
Ms Kacungira ayaa tiri "aad baan ula yaabanahay, balse si xoog leh ugu faraxsanahay in ay guulaystay, sharaf bay ii tahay, waanan ku faraxsanahay in uu ku guulaystay abaalmarintan."
"in aan qayb ka noqdo sii wadidda wixii uu ka tagay Komla sharaf bay ii tahay, waxayna iila muuqataa wax riyo ku dhow. Dadaalkayga oo dhan baan galin doonaa sidii aan uga soo bixi lahaa abaalmarinta la igu aaminay, una xaqiijin lahaa in aan faa'iidada aan ka helo fursadan in ay meel iga wayn gaari doonto." ayay raacisay Ms Kacungira.
Vera Kwafkofi oo ah tifaftiraha barnaamijka wararka BBC Africa, oo ka mid ahayd Xaakimyada, ayaa sheegtay in Nancy ay tahay gabar weriye ah oo leh aqoon iyo khibrad durugsan oo markiiba aad dareemi karto.
Agaasimaha guud ee Wararka iyo barnaamijyada BBC, James Harding ayaa sheegay in markii Komla uu dhintay, ay qasaare xoog leh ay u ahayd BBC, Africa iyo dhamaanteenba.
"waan ku faraxsanahay in Nancy aan ka helnay in ay tahay weriye aad u jecel saxaafadda oo hibo u leh, way u qalantaa in ay ku guulaysatay abaalmarinta loogu magacdaray Komla." James Harding.
Nancy waxay ku soo kortay Uganda, waxayna gashay jaamacadda Makerere ee Kampala.
Muddo 14 sano ka badan ayay ka shaqaynaysa warbaahin kala duwan oo dalalka, Kenya, Uganda iyo Tanzania ku kala yaalla, waxayna haysataa shahaadada dhinaca master-ka ee isgaarsiinta oo ay ka qaadatay jaamacadda Leeds.
Waxay hadda wararka ka soo jeedisay barnaamijka Prime Time ee wararka maqribnimo ee KTN, halkaas oo ay sidoo kale ka tahay tifaftiraha wararka bulshada ee telefishinka.
Waxaa kaalimaha labaad galay Leila Dee Dougan oo ka Koonfur Africa u dhalatay iyo Paa Kwesi Asare oo Ghana ah.
Komla Dumor waxaa uu ahaa tabiye sare oo la yaab leh, una dhashay dalka Ghana, muddada kooban ee uu noolaa saamayn la yaab leh ayuu ku yeeshay Ghana, Africa iyo adduunka oo dhan.
Wuxuu matalayay Africa isku kalsoon, jecel internet-ka oo ganacsiga ku dhisan qatar qaadashada.
Intii uu saxaafadda ku jiray,wuxuu ahaa weriye sheegay sheekooyin soo jiidasho leh, Komla si nasasho la'aan ah ayuu uga shaqeeyay in wararka Africa ee aan horay loo maqan uu u soo gudbiyo dunida inteeda kale.
BBC ayaa u mahadcelinaysa Standard Chartered iyo hay'ado kale oo taageero ka gaystay abaalmarinta.